Okweqile umzimba Izinwele - inkinga abesifazane namantombazane amaningi. Fight ke kumele njalo! Ladies kukhona imishini, epilators, musa waxing namakhemikhali okhilimu, ukwelashwa isithombe-epilation futhi kagesi izinwele ukususwa, ngamafuphi, ngazo zonke izindlela uzama ukuqeda uboya obungathandeki.
Kodwa! Umthelela ukusetshenziswa insingo akuhlalanga isikhathi eside futhi ezimbili, esiphezulu izinsuku ezintathu inqubo ukwenze futhi. Ukusebenzisa lisebenze, kufanele ubekezelele ubuhlungu, futhi ukuluma kwesikhumba - hhayi siyindlala. Chemical okhilimu kubangele komzimba kanye zokwelapha izinwele ukususwa nesithombe-electro-epilation akwanele, okuyinto eqolo, ngakho ngaphezulu hhayi njalo ngempumelelo! Futhi ukuze wenze Waxing ezinhle ngempela, cishe uyobe unendaba ukukubuyisela ngokuphelele salon ubuhle, ngoba ukuthengwa alisilungele ukusetshenziswa siqu Voskoplav okhokhelwayo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba "ukuveza" phambi yomfokazi, eqinisweni, indoda - okuyinhloko cosmetologist noma izinwele ukususwa. Futhi kulungile, uma kuziwa kwezinyawo zakhe, kodwa bikini zone ...
What uhlala amantombazane? Eqinisweni, kukhona kakhulu kukho - ushukela izinwele ukususwa ekhaya. Le nqubo, ngasendleleni, manje ukugqugquzela kanye beauty salon (ukusibiza shugaring (ushukela ngesiNgisi okuthiwa «ushukela»), isi-Persian noma caramel Waxing), kodwa njengoba besho, kungani akhokhe imali ethé xaxa? Ushukela izinwele ukususwa ekhaya nomphumela ofanayo njengoba i salon ezibizayo! Qiniseka wena uyokwaneliswa, ukuze uqinisekise lesi, ungafaka e nosesho "indlela yokwenza ushukela izinwele ukususwa ekhaya" futhi indlela labo ababezama le ndlela, bonke une ukuchaza.
Ukuze ukulungiselela lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo esihle kakhulu hair ukususwa, uzodinga: ushukela, lemon namanzi.
Ukuphambana oyedwa session zimi kanje: 10 wezipuni ushukela, 1 isipuni ngamanzi nangoMoya umpe lukalamula. Kuye "ukucutshungulwa endaweni" isibalo izingxenye ingxube zizoshintsha ngokuba izimpondo kudingeka ngokucacile esingaphansi ngokuba izinyawo.
Ngakho, izingxenye kufanele ngephutha isitsha sensimbi, ngiyibeke phezu komlilo ubuncane ugovuze kuze abushelelezi. Phakathi ukupheka, akudingeki ukuba ushintshe lokushisa! Lapho ingxube Uthola umbala onsundu ngokusagolide futhi isesikhathini uyokulwa iphunga caramel - ke isicishe ilungele. Kuyadingeka ukunikeza "wax" imizuzu imizuzu engaba ngu-10 (kuze Bubbles emoyeni encane phezu). Manje ungakwazi uvala ekushiseni, asuse spoon bese uvumele ingxube kuphole kancane.
Lapho shugaring ingxube yekani ukuba esivuthayo, akufanele sithathe isiqeshana ekhuluma ngeminwe yakhe. Uma isiqeshana akusho anamathele iminwe waligingqa ibe ibhola - ingxube wenza kahle futhi isilungele ukusetshenziswa. Uma izinti ingxube - ukuthi kukhona okungalungile, futhi cishe, izimila ngale ndlela ayikwazi ukususwa. Ngaphambi kokuba bathathe izinwele ukususwa, ukusakaza ukuxuba kancane ngaphansi kwesandla sami, ulinde imizuzwana embalwa waklebhula off ngqo ngokumelene ukukhula izinwele. Kulungile? Khona-ke ushukela izinwele ukususwa ekhaya uyophumelela! Uma umphumela Akukhona lokho kufanele kube ke ingxube sibonakala eziningi amanzi kanye noshukela izinwele ukususwa ekhaya nale ingxenye "wax" ngeke aphumelele. Esikhathini esizayo, wena nje udinga ukwengeza amanzi kancane.
Ngokulandela inqubo okuthiwa ushukela izinwele ukususwa ekhaya, ungasebenzisa indwangu emapheshana, njengoba ne Waxing.
Ngale ndlela, izinwele ukususwa kungenziwa noma kuphi emzimbeni, kuhlanganise ubuso labia. Kodwa izinwele kufanele kube ayisekho kuka-2 mm, kungenjalo shugaring ingxube kuyodingeka usebenzise eningi, futhi inqubo izoholela uqobo.
Uma isikhumba ngemva izinwele ukususwa kubonakala kuwe lipkovatoy kancane, kufanele nje ushawa - futhi ujabulele isikhumba bushelelezi, soft futhi abushelelezi, okuyinto uzokunika ushukela izinwele ukususwa ekhaya!
Davines (imoto): Ukwakheka kanye nokubuyekeza
Eluka French okunalokho - i kwekhanda nenhle!
Yiziphi ukugunda izinwele zabesifazane obuseduze
Indlela yokwenza kwekhanda efana Lely kusuka uchungechunge oluthi "Deffchonki"?
Inyama yenkomo inhliziyo caloric abilisiwe iyisitshulu
Njengoba inthanethi ingosi is kuguquka Ebudlelwaneni Kuphumelele
IJerusalema Elisha eMoscow: izinkambo
Uyazi yini ukuthi ukwenza valentine ngezandla zakho siqu?
Kungani kukhona traheidny ukhwehlela futhi indlela yokuphatha kulo?